Utuu hin baratiin qormaati hin jiru. Kanaafu waamicha fi ibsa GAMTAA BARATTOOTA OROMOO (GBO) kana gadi dabarsee kana uumani Oromoo fi dhaabbilee Oromoo hundi akka tumsitan isiin gaafachaa baratoon Oromoo utuu adda adda hin qoodamiin gutuma Oromiyaa keessati qoormata kana akka mormitan fi qormata kan fudhachuu dandeesan erga seeran baratan booda, akkasumasii ijoolee hidha jiran erga ba’aan isiin waliin qixaa baratan fi naga fi tasgabin erga umamee booda malee harka waraana biyyoolessa jalati qormata fudhachuun darbuuf utuu hin tanee kufatii fudhachuu dha.
Dhaamsa Arifachiisaa Barattoota Oromoo Qorumsa Naannoo fi Biyyoolessaa Bara 2016 Fudhachuuf Jiran Maraaf, Maati Baratoota fi Lammii Oromoo hundaaf !!!
Akkuma beekkamu Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Sadaasa 12,2016 Godina Shawaa Lixaatti goototni barattootni keenyaa Qeerroon barattootni keenyaa Dandii Mana Barnootaa Aanaa Giincii Sad.2ffaatti eegale oolee osoo hin bulin akka ibidda saafaaatti laboobee goleewwan Oromiyaa mara walgahuudhaan mana tokkoon tokkoo ummata Oromoo seenuu dandaeera. Sochiin eegalame Oromoo idil addunyaa jiran mara dammaqsuudhaan sagaleen Oromoo addunyaatti akka dhagaamuu fi sochii sabaa himaalee addunyaa hawwate taee argameera.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee mormii ummata Oromootti kan rifate ummata harka qullaa mirga isaaf falmatu shororkeessaadha jechuun ifaan ifatti waraana irratti labsee guyyaa adiidhaan dhiiga ummata keenyaa dhangalaasaa ture, ittumas jira. Yaa tau malee, ummatni Oromoo roorroo bara dheeraa waan jibbeef afaan qawwee fuuldura dhaabbachuudhaan FDG gaggeeffamaa ture jalqaba bara 2016 irratti gara FXGtti tarkaanfachisee jira. Mootummaan wayyaanees abdii kutachuudhaan waraana daangaa irraa qabu gara Oromiyaa deebisuun Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jala galcheera. Waraanni mootummaa wayyaanees ummata Oromoo ajjeesuu, madeessuu, hidhuu fi dararuu, dubartoota gudeeduu fi qabeenya ummataa saamuu irratti bobbaee argama. Bakkeewwan tajaajila ummataa hundi ( manneen barnootaa, buufataaleen fayyaa, hospitaalotni, lafti gabaa, waajjiraaleenii fi kkf) bakka qubsuma waraanaa tauudhaan tajaajilaa jiru.
Sababa kanaan mootummaan wayyaanee mormii cimaatu kauu dandaa jechuudhaan waraana qabu dabalataan gara Oromiyaatti feaa jira. Qorumsi kan kennamu humna waraanaan eeggamanii akka taus tilmaamuun nama hin dhibu. Kanaafuu, barattootni Oromoo lafa jirtanii quba walqabaachuudhaan tokkummaan kaatanii diddaa agarsiisuun dirqama taa. Mootummaan wayyaanees barataan Oromoo sadarkaa itti aanutti akka hin tarkaanfanne godhuuf tattaafachaa kan jiru tahuu ifumatti hubannee irree tokkoon diina fuuldura dhaabbannee diddaa keenya mulisuu qabna.